गाई पाले दुध दिन्छ, भैसी पाले मोहि, हिजो मैले छोरो पाले,के पाएत खै ? आँसु रोकिने छैन एकपटक पूरा पढ्नुहोला – Todays Nepal
गाई पाले दुध दिन्छ, भैसी पाले मोहि, हिजो मैले छोरो पाले,के पाएत खै ? आँसु रोकिने छैन एकपटक पूरा पढ्नुहोला
गाई पाले दुध दिन्छ , भैसी पाले मोहि, हिजो मैले छोरो पाले,के पाएत खै ? रुख हुर्काए फल दिन्छ,कुखुरा हुर्काए मासु, छोरा छोरी हुर्काएर , आखा भरी आसु । उठन बस्न सक्दिन ,पापी पेट रुन्छ , नत छोरा न बुहारिले,मेरो कुरा सुन्छ । कहिले आउला काल भनी, दिनहरु गन्छु, छोरा तैले न्याय पायस,अन्न्याय म सहन्छु।
९ महीना सम्म आमाले हामीलाई पेटमा पाल्छिन ! गर्भावस्था भरी वाकवाकी सहन्छिन ! खुट्टा सुन्याई-सुन्याई पेटको छाला तन्किन्जेल सम्म बोक्छिन ! दुख, पिंडा, आंसू, पसीना, र रोदन सहेर पनि हामीलाई केहि नहोस भनेर ध्यान दिन्छिन !
सिंडी चड्डा गार्हो हुन्छ , जुत्ता लगाउन झुक्न सक्दिनन तैपनि पेटको नानीलाई केहि नहोस भन्ने चाहन्छिन ! सूत्दा कोल्टे परेर सुत्छिन ! पेट भित्र नानीले हानेको लात्तीले उनको निंद्रा बिगारिदिन्छ ! पेट भित्र बच्चा चल्दा उनको भोक उड्छ ! त्यसपछि मुटु फूटने व्यथा सहेर हामीलाई जन्माउँछिन . ऊनि हाम्रो नर्स बन्छिन छाती को दशधारा दूध चुसाएर हुर्काउछिन !
ऊनि हाम्रो भान्से बान्छिन ! ऊनि हाम्रो नोकर बान्छिन ! पुलिस बनेर सुरक्षा दिन्छिन ! गुरूआमा बनेर क ख रा शिकाउछिन , ड्राइभर बनेर घुमाउन लैजान्छिन ! फ्यान बनेर प्रसंसा गर्छिन . साथी बनेर माया गर्छिन ! हाम्रो लगी संघर्ष गर्छिन , रुन्छिन् कराउछिन, अरुसंग झगड़ा गर्छिन !
खांदा, पिउदा, घुम्दा नानी पाहिले भनेर बच्चालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर मात्र आफु खान्छिन हाम्रो लागी अहोरात्र खट्छिन . डॉक्टर बनेर स्वास्थ्य को ध्यान राख्छिन ! तैपनि यसको बदलामा केहि माग्दीनन तर आजका छोरा-छोरीहरु यसको बदलामा बूडाभएका बा-आमा लाई बृद्धाश्रम पठाउँछन् ।
फेरी यूरोप जानेभए अशोक दर्जी, बाबुआमासहित काठमाडौं आउँनुको रहस्य यस्तो